आज चन्द्रमाको सञ्चार धनु राशिमा हुँदै, कुन–कुन राशिलाई लाग्दैछ ग्रहण दोष ? - Everest Dainik - News from Nepal
आज चन्द्रमाको सञ्चार धनु राशिमा हुँदै, कुन–कुन राशिलाई लाग्दैछ ग्रहण दोष ?
काठमाडौंः आज चन्द्रमाको सञ्चार दिन र राती धनु राशिमा हुने छ । यो राशिमा केतु भएको कारण ग्रहणको योगको प्रभाव कैयन राशीमा हुने छ । आज नै गुरुको पनि चाल परिवर्तन हुँदैछ । वृश्चिक राशीमा चलिरहेका गुरु अब सिधा रेखामा हिँड्ने छन् ।
कस्तो हुनेछ त आजको दिन ?
टाढाको यात्रा न गर्नुस् । सम्भव हुनसक्छ भने नगर्दा वेश । बाहन सावधानीपूर्वक चलाउनुस । चोट लाग्ने आशंका देखिन्छ । अपरिचितमाथि विश्वास नगर्नुस । जोखिमपूर्ण कामबाट टाढा बस्नुस । भाग्यले ४८ प्रतिशत साथ दिने छ ।
आज अनन्द र उत्साहले दिन व्यतित हुने छ । निकट सम्बन्धी र परिवारका सदस्यहरुसँग तालमेल बढने र सहयोग पाउनु हुने छ। आर्थिक सवालमा दिन राम्रो छ । रुचिकर भोजनको आनन्द पाइने देखिन्छ । भाग्यले ७८ प्रशित साथ दिने छ ।
दिन उन्नतीदायक छ । काममा व्यस्त रहनुहुनेछ । अचानक धन लाभ प्राप्त हुन सक्छ । बृद्दि विवेकले सफलता पाइने छ भाग्यले ८५ प्रतिशत साथ दिने छ ।
याे पनि पढ्नुस भोलीदेखि सूर्य धनु राशीमा जाँदै, थाहा पाउनुस् तपाइको राशीमा के प्रभाव पर्छ ?
ग्रह नक्षत्रहरुको स्थितिमा परिवर्तन तपाईका लागि लाभदायी छ । परिस्थिति तपाईको पक्षमा हुने छ । जुन क्षेत्रमा तपाई प्रयास गर्नुहुनेछ त्यहाँ सफलता पाउने देखिन्छ । मनोरन्जनमा बढी समय व्यतित होला । सानो दूरीको आनन्ददायक यात्रा हुनसक्छ । भाग्य ७९ प्रतिशत साथ दिने छ ।
तपाईको जीवनमा राम्रो चलिरहेको अवस्थालाई कायमै राख्न सतर्क हुनु जरुरी छ । आज वाद विवादमा नपर्नुस । क्रोध र वाणीमा नियन्त्रण राख्नुस भाग्य ५९ प्रतिशत साथ दिने छ।
आत्मविश्वास र पराक्रममा वृद्धिका कारण आज सफलता पाउनु हुनेछ । मेहनतको अनुपातमा लाभ पाइने र खुशी भइने छ । आज साथीहरुको सहयोग पाइएला । जीवनसाथीको सहयोगबाट लामो समयदेखि रोकिएको काम पुरा हुने देखिन्छ । भाग्य ८० प्रतिशत साथ दिने छ ।
प्रत्येक कार्यमा सफलता हासिल हुने, सोचेको कार्य पूरा हुने । रोकिएको काम पनि बन्ने सम्भावना देखिन्छ । परिवारका सदस्यको साथ पाइने र धन प्राप्तीको योग छ । अनावश्यक खर्चमा नियन्त्रण गर्नुहोला । भाग्य ९२ प्रतिशत साथ दिने छ ।
लामो समयदेखि चलिरहेका समस्या आज हल गर्ने अवस्था देखिन्छ । जागिरमा अधिकारीको सहयोगबाट उत्साह बन्ने छ । आफन्तको प्रेम र सम्मान पाइने छ । भाग्य ८० प्रतिशत साथ दिने छ ।
पूर्वमा सञ्चित गरिएको मान सम्मान र लाभलाई कायम राख्नका लागि आज समझदारीले काम गर्नुपर्ने छ । अनावश्यक खर्चबाट जोगिनुस् । दिउँसोपछि काममा बाधा आउने आशंका भएकोले सावधानी राख्नुहोला । अरु राम्रो छ । भाग्यले ८९ प्रतिशत साथ दिने छ ।
आज माता लक्ष्मीको कृपादृष्टि तपाईमा बनिरहनेछ । तपाईको दिन मंगलमय बित्नेछ । विशेष लाभ को पनि योग छ । कार्यमा पूर्णता हुने छ । जोखिमपूर्ण निवेशमा पनि लाभ हुने सम्भावना छ । भाग्य ९५ प्रतिशत साथ दिने छ ।
आज दिनभरी कामको व्यस्तता देखिन्छ । मान सम्मान र यशमा बृद्धि हुने छ । पूजा पाठले मन प्रसन्न होला । धार्मिका काममा रुचि बढला । प्रिय व्यक्तिसँग भेट र सहयोगको प्राप्ती हुने छ । दिन राम्रो बित्ने छ । भाग्य ७८ प्रतिशत साथ दिने छ ।
भाग्य आज तपाईका साथ दिने छ । अध्यात्मिक सुख र शान्तिको वातावरण बन्ने छ । नयाँ अवसर पाइने र सन्तान पक्षबाट सन्तोषजनक परिणाम प्राप्त हुने छ । भाग्य ८३ प्रतिशत साथ देला ।
ज्योतिर्ष आशुतोष वाष्र्णेय